Umhla My Pet » Little Iyaziwa Iindlela Fumana Uthando Ubomi Bakho
Nangona sonke umfanekiso loo ntlekele idlala indima ebalulekileyo eziwela eluthandweni, nezenzo zethu amaxesha ikhwaza. ngezantsi, siye ndizityhilile iindlela ezahlukeneyo apho unako ukufumana uthando ubomi bakho.
Little ndlela #1: Lungiselelani Love
A nolwalamano kuthatha ixesha, ukuzibophelela, kunye nomngcipheko. Undoqo ubudlelwane obunempilo ndiphumelele uzithande kuqala, olu thando ikuvumela ukuba umthande ngokwenene omnye umntu. obomeleleyo, wena nabanye, nakhelwe phezu trust, ukunyaniseka, kunye nonxibelelwano.
Little ndlela #2: Yazi kwaye Yiqonde neMigangatho lwakho
Nangona ku lunganga ukuba kugweba umntu ngokupheleleyo zawo iintsilelo, kubalulekile ukuba ukumisela imida. Sonke siyazi ukuba kukho iingcinga ezithile ezisingela enokusithintela ulwalamano lwakho. Siyazi kwakhona ukuba kukho ukuziphatha ezithile iimpawu ukuba sifuna kwaye kufuneka kubudlelwane. Ukwazi kwabo kuya kukunceda ukuhlahlela indlela nokufumana ezinye yakho ebalulekileyo.
Little ndlela #3: Yazi Umahluko phakathi Ukuthanda nguMntu Enothando uthando lwabo
Nto yodlula ngokuba uthando; nokuba, amaxesha oku imvakalelo overpowers iingcinga ayinyaniso iqabane yethu. Kubalulekile ukuba ahlawule ingqalelo ukuba uyakwazi ukwahlula phakathi iimpawu ezingundoqo kunye nabo kubeka phezu kwabo lomntu.
Little ndlela #4: Yiba kwi Ekunene Indawo Ngexesha Elifanelekileyo
Kukho iindawo ezithile apho siziva nje sifana kwisixa yethu. Nokuba ke ngelo lixa amahle kunye nabahlobo, ekonsatini okanye ubugcisa bonisa, okanye udidi, uza kubalapho. ubuntu bakho baya kuqaqamba, esitsalela abantu kuwe.
Little ndlela #5: Phuthumani ukusondelelana Emotional phambi ukusondelelana Physical
ekufumaneni “uthando yobomi bakho”, eninalo ibalulekile. Nangona ngokungxama kwiintlobano zesini ngokuyimfuneko yinto embi, oko ukwenza eninalo nzima kokulawula.
Little ndlela #6: uzithembe wena
Mamela emathunjini yakho, malibe lelokuphumza ukuthatha ixesha lakho, uze ube nomonde imigwebo yakho. Ngaxeshanye, kubalulekile ukuba sihlale wayezamkela iimbono ezintsha kunye neengcamango ngothando.
Nokuba kwizibetho zayo, ezi ndlela yaziwa kancinane, okanye zombini – kubalulekile ukuba soze ningayekeleli uthando lokwenene. Kuba xa unayo, ke yeyona nto yanelisayo ehlabathini.
5 Iintlobo Yokuqala Daters. Yiyiphi Ngaba?
Indlela Ukungafuni Nentlungu Yokwahlukana